GEERI: Man United Oo Ku Dhawaaqday In Uu Geeriyooday Tababarihii Soo Saaray 'Class of '92' Ee Eric Harrison Iyo Gary Neville Oo Fariin Qiiro Leh Soo Saaray.. - Gool24.Net
GEERI: Man United Oo Ku Dhawaaqday In Uu Geeriyooday Tababarihii Soo Saaray ‘Class of ’92’ Ee Eric Harrison Iyo Gary Neville Oo Fariin Qiiro Leh Soo Saaray..
Kooxda Manchester United ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in uu geeriyooday tababarkii kooxdeeda da’yarta ee soo saaray ‘Class of ’92’ ee Eric Harrison. Man United ayaa shaacisay in Eric Harrison oo 81 sano jir ahaa uu geeriyooday.
Eric Harrison oo hadda geeridiisa la shaaciyay ayaa ahaa tababarihii soo saaray ciyaartoydii Man United caanka ka noqday ee ay ka mid ahaayeen Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham iyo Gary Neville.
Eric Harrison oo ka soo ciyaaray Halifax, Hartlepool, Barrow iyo Southport intii uu ku jiray waayihiisii ciyaareed ayaa sanadkii 1981 kii waxa uu noqday tababarihii kooxda da’yarta Man United iyada oo Ron Atkinson uu waqtigaas kala soo wareegay Everton.
Eric Harrison ayaa markii ugu horaysay waxa uu Man United u soo helay Norman Whiteside iyo Mark Hughes kuwaas oo qayb ka ahaa guuldaradii kooxdii da’yarta Man United ee finalkii FA Youth Cup ee Watford laakiin Eric Harrison ayaa horumar layaableh Man United ku sameeyay markii uu Sir Alex Ferguson la wareegay Man United sanadkii 1986 kii.
Eric Harrison ayaa soo saaray kooxdii Man United ugu fiicnayd taariikhdeeda ee loo bixiyay ‘Class of ’92’ wuxuuna kooxda da’yarta United ka soo saaray ciyaartoy ilaa hadda sumcada ugu wayn ku leh taariikhda Man United. Gary Neville oo ka mid ahaa ciyaartoydii da’yarta ahaa ee uu soo barbaariyay Eric Harrison ayaa fariin qiiro leh geeridiisa ka soo saaray.
Aan ku horayno warka ay Man United ku shaacisay geeriyada Eric Harrison waxaana qoraalka lagu yidhi: “Waxaa si aad ah noo murugo galiyay warka ah in tababaraheenii hore ee da’yarta ee Eric Harrison uu xalay geeriyooday. Fikirkyaga iyo ducadayadu waxay la jiraan qoyska Eric iyo asxaabtiisii ee waqtigan murugada leh ee adag”.
Gary Neville ayaa isna dareenkiisa murugada leh ka hadlay wuxuuna yidhi: “Waxaanu waynay lataliyihii khibrada lahaa, tababarahayagii iyo ninkii anaga na soo sameeyay. Waxa uu anaga na baray sida loo ciyaaro, sida aan waligaa laysku dhiibin, sida ay muhiimka u tahay in aad dagaalkaaga shaqsiga ah ku guulaysto, iyo waxa aanu u baahnayn in aanu samayno si aanu ugu ciyaarno kooxda kubbada cagta Manchester United. Eric wax walba ayaad nagu leedahay”.